Imibhede yezinja zokulala okuzolile ezinemilenze yakho emine. Ukuthenga Guides
Qala ikhemisi ukuphulula imibhede inja
1 Umbhede wezinja - ukhululekile, uqobo futhi uqobo
2 Umbhede wezinja inja ubhasikidi
3 Yiziphi izinzuzo zemibhede yezinja ezibhekene nebhasikidi?
4 Inja yimuphi umbhede wenja efanelekayo?
5 Kumele kube mkhulu kangakanani umbhede wenja?
6 Yiziphi izinto okufanele umbhede wezinja uqukethe?
7 Ungawahlanza kanjani umbhede wezinja?
8 Yisiphi indawo esifanele umbhede wezinja?
9 Uthola kanjani inja yakho embhedeni?
10 Yini okufanele ucabangele lapho uthenga umbhede wenja?
11 Isiphetho sokuthenga inja
Das inja embhedeni - ukhululekile, uqobo futhi uqobo
Inja ichitha isikhathi esiningi sokulala. Ngakho indawo ayithandayo ayiyona insipho noma umbhede wenkosi nenkosikazi, kufanele ihlinzekele indawo yakhe yokulala ekhululekile. Lapho angakwazi ukubuyela bese evala kanye. a inja embhedeni Ngakho-ke kuyindlela enhle yokunikela inja yakho ukuphepheka okuphephile kanye nendawo oyintandokazi yendawo oyithandayo eyodwa.
inja embhedeni vs. inja ubhasikidi
a inja embhedeni ayinomkhawulo ophakeme kakhulu / / noma ohleliwe ebhasikisini lenja, kodwa kuphela umkhawulo ophansi. Njengoba inja ichitha isikhathi esiningi sokuphila kwakhe embhedeni wakhe, kufanele ucabange ngemodeli efanelekile ngaphambi kokuthenga. Kuphela kufanelekile nenja futhi inja embhedeni endaweni efanele imema ama-four-legged amane ukuze aphumule, ahambe futhi alulame.
Yiziphi izinzuzo imibhede inja ngokubhekiselwe kubhasikidi?
Kuye ngezintandokazi zenja yakho enemilenze emine, umbhede okhethekile wenja ehambisana nebhasikidi ingaba nezinzuzo ezithile. Njalo kunjalo imibhede inja isibonelo ngenxa yezinga labo eliphansi kangcono izinja ezigugile noma ezigulayo.
Futhi ikakhulukazi izinhlobo nezinja ezikhudlwana, bathanda ukwelula isikhathi eside noma ukuphenduka ebusuku, kukhona eyodwa inja embhedeni Kugcinwe kangcono kunesitokisini esincane.
Umbhede uvumela inja ukuba ibuke ngokugcwele imvelo yayo ngenxa yomkhawulo wayo ophansi. Ngakho-ke, ngesikhathi sokuphumula, uhlale enombono wakhe, ngaphandle kokuphakamisa ikhanda lakhe elikhulu.
imibhede inja ingahlanzwa kangcono kunezingqikithi ezenziwe nge-rattan noma ezinye izinto. Ezimweni eziningi, unekhava elikhishwayo elingahlanzwa ngomshini wokuwasha. Lokhu kubaluleke kakhulu uma ingane yakho enemilenze emine igula noma idala futhi ngakho-ke i-mala ingenzeka.
Futhi okokugcina kodwa okungenani imibhede inja ngokuvamile bamane bakha futhi bazivumelanisa ngokwabo ngaleyo ndlela bengenasici ekamelweni ngalinye lokuphumula. Ukukhethwa kwemibala, imilo kanye nezinto ezihlukeneyo kuhlukile, ngakho-ke kufanelekile kuzo zonke ukunambitheka inja embhedeni ingatholakala.
Ngoba iyiphi inja a inja embhedeni wusizo?
Njengoba sekushiwo kakade, lolu hlobo lwendawo yokulala lufanelekile ikakhulukazi ezindala, asebekhulile kanye nezinja ezigulayo, ngoba zingangena ngaphandle kokuzikhandla futhi zingenasisekelo. Umbhede unikeza inkululeko enkulu yokunyakaza futhi ibuye ibe nzima noma ilula kancane, kuye ngokuthandayo. Lokhu kwandisa induduzo yokulala phansi futhi ngaleyo ndlela ukwaneliseka umngane wakho onamagundane amane. Ngenkathi izinja ezamahloni nezesabisayo zingcono kakhulu ebhodini elivaliwe noma embhedeni ophezulu, iningi lezinja ezinezinyathelo ezine ezilinganayo kungenzeka ukuthi lihlala umhlalaphansi lapho lingabheka khona yonke imvelo yakhe.
Kufanele kube mkhulu kangakanani lokho? inja embhedeni kube?
Ubude nobubanzi bendlala yenja buxhomeke kubukhulu benja. Akufanele kube mncane kakhulu noma kukhulu kakhulu. Usayizi ophelele ubalwa kusukela ubude besilwane sakho esinemilenze emine. Akufanele kufakwe emaphethelweni esihlalo endaweni elele kakhulu inja embhedeni senzakalo. Kodwa-ke, ungaphinde ulinganise inja yakho kusukela ekugcineni komsila kuze kufike ku-snout kanye ne-10 cm ukuze usule. Bese ufaka i-20 ku-30 cm ukuze uthole usayizi ophelele wobheyi. Lokhu kuvumela inja ukuthi ibambe kahle futhi, lapho ilele, iphinde ijikeleze ingaphazamiseki ngaphandle kokuqhuma emkhawulweni.
Uma ulinganisa futhi ubala i imibhede inja Ungaphinda ulandele imiyalelo yomkhiqizi njengamanothi amaningi anikezwa ngezincomo ezifanele futhi aqukethe uhlu lwezinhlobo ezifanelekile kulesi sayizi imibhede inja kufanelekile.
Kuphi ukwaziswa kufanele inja embhedeni ukuma na?
Akukhona nje kuphela induduzo, kodwa futhi nokuhlanzeka, umbhede wesilwane sakho esinemilenze emine kufanele sibe nencazelo elula yokuhlanza. Okuthandwa kakhulu yizinto ezinjenge-microfiber, i-polyester noma i-cordura, kanye nezinye izindwangu zokuxuba zanamuhla, zigcwele futhi zithinta. Abathandi bezinga eliphezulu lokuphila bangathola imikhiqizo eyenziwe ngekhwalithi ephezulu noma ubuchopho obufayo, kodwa kunakekelwa lapha ukuthi inja ayifaki ukufaka ngejazi elimanzi, njengoba le nto ayibekezelelanga umswakama wesikhathi eside. Kusukela futhi ukuhlanzwa of the imibhede inja kuphela ngesandla, lezi zibhebhe zihlukile.
Lapho ukhetha okuphelele inja embhedeni kufanele futhi uqaphele ukugcwaliswa kwemikhiqizo efanele. Njengabantu kukhona nabathandi bezindawo zokulala ezithambile noma ezinzima. Uma ubheka inja yakho kusengaphambili, ungathola ukuthi yiziphi izilwane zakho ezinemilenze ezine ezikhethiwe. Ingabe kunalokho ulala phezu kwe-sofas elula, noma ingabe ulele emaceleni? Ezitolo zezokwelapha, ungase uzame amamodeli ahlukene nge-model yakho enemilenze emine.
Ngokuvamile, upholstery of imibhede inja kusuka kuma-polyesterflies, ama-foam flakes noma ama-styrofoam.
Ama-polyesterflies asetshenziswa kabanzi, eshibhile futhi angenasisekelo. Kodwa-ke, akusilo ifomu, njengokungahleleki komthetho okuthuthukayo, okungaphazamisa ukulala.
Ama-flakes of material e-foam anezakhiwo ezifanayo ngakho-ke ngeshwa nazo ziyinkinga efanayo. Noma kunjalo inja embhedeni ingaba lula kakhulu nge-filler, ayihlali isikhathi eside isikhathi eside.
I-styrofoam amabhola, ngakolunye uhlangothi, ifanelana ngokugcwele nomumo womzimba wenja, kodwa banokukhubazeka ukuthi bayagubha lapho bejika. Ukuthuthumela kombhede wansuku zonke kuyadingeka, ngoba kunengozi yokuthi inja iqhubezela izinyawo eceleni futhi ilele phansi. Njengoba izindawo ze-styropic azihlali isikhathi eside, kufanele imibhede inja igcwaliswe ngalokhu kugcwaliswa ngezikhathi ezithile noma ubuhlalu buhanjiswa. Lokhu kufanele kwenziwe ngokukhethekile ngaphandle kwefulethi, njengoba amabhola amancane esatshalaliswa kulo lonke igumbi futhi anamathele ezinkampanini noma emagumbini.
okuningi yesimanje imibhede inja ngezinye izikhathi futhi kukhona ukugcwaliswa okwenziwe nge-viscose foam noma i-latex. Lezi zinto ziqinile kakhulu futhi zivumelane nomumo womzimba ngamunye. Ama-mattress akhululekile abantu ahlanganisa ikakhulukazi ngalezi zinto ngakho-ke athembisa izinga eliphakeme lokududuzeka. Lezi zinto azikwazi ukuhambisa futhi ngaleyo ndlela zibe nokukhululeka kwengcindezi. Ngeshwa, lezi ziyi imibhede inja futhi okunye kubizayo, ukuthenga, okuyinto Nokho ngokushesha inzuzo.
Ungayithola kanjani eyodwa inja embhedeni Hlanza?
Ezimweni eziningi, lezi zibhebhe zenzelwe izinja ukuze zivulwe kalula noma ziqhutshwe kalula. Lokhu kuyadingeka nokugcina inhlanzeko. Ukuthungana okuncane ngendwangu emanzi ngokuvamile kuyanele. Noma kunjalo, kungadingeka kwezinye izimo inja embhedeni futhi ukugeza ngokugcwele.
Ngaphezu kokuhlanza izinwele nesihlabathi usebenzisa i-vacuum cleaner noma ibhulashi imibhede inja ngakho-ke kungaba nokuhlanzwa ngomshini. Ikakhulukazi uma inja ifika emanzini futhi ingcolile kusukela ekuhambeni bese ibuyela embhede wayo noma igugile noma igula, ukuze ingakwazi ukuyeka, i-lief of the four-legged kufanele inikezwe izembozo ezikhishwayo. Lokhu kwenza ukuhlanzwa emshini wokuwasha kwenzeke. Ngaphambi kokusebenzisa isomisi, noma kunjalo, kufanele kukhishwe. Ingozi yokwehliswa kwempahla noma i-shrinkage inkulu kakhulu. Ngakho-ke, kuyazuzisa uma uthenga eyodwa inja embhedeni qinisekisa ukuthi kunezembozo zokufaka esikhundleni semodeli efanele.
Yisiphi indawo esifanelekayo inja embhedeni?
Ngaphezu kokukhetha izinto ezifanele zokulala kwejaji, indawo nayo idlala indima ebalulekile. Ngakolunye uhlangothi, i-quadruped yakho kufanele ikwazi ukuguqula futhi ngakho-ke akudingeki ukuba ulale ebusweni obukhulu kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, izinja zithanda ukugcina umbono ophelele ngisho nangesikhathi sokuphumula futhi ngakho-ke azifuni ukuxoshwa ekhoneni elingacacile. Indawo enhle kakhulu endaweni lapho inja ingabona khona ikamelo lonke, kodwa ngaphandle kokungena endleleni. Futhi qinisekisa ukuthi umbhede awuwona ngqo phambi kwesheshri, futhi awuvezwanga ilanga eliqondile noma i-drafts. Umzila noma iwindi elikhulu elingaphansi kwelanga ngokukhanya kwelanga elide kufanele kube njalo. Njengoba inja ihlala ithanda ukuhlanganyela empilweni yakho, kufanele imibhede inja eduze nezindawo lapho uhlala khona isikhathi eside, i-sofa noma idesksi. Lokhu kuvumela inja ukuba isondelane nawe futhi ihlale inomuzwa wokubhekisisa isimo ngasinye.
Indlela yokujwayela i-quadruped yayo kulokho inja embhedeni?
Ezimweni eziningi, ukuhamba okunethezeka ngesayizi elifanele kanye nendawo efanele ye-quadruped yakho kuzokwamukelwa ngokushesha kakhulu. Kodwa ngisho nasenkulwaneni noma izinja ezincane kungenzeka ukuthi aziyedwa kule entsha inja embhedeni futhi izokulandela ngokushesha uma ususa. Uma uqala ukuzizwa kanje, ungazama ukwenza umbhede wakho wenja entsha ukhangise ngokubeka ithoyizi yakho oyithandayo noma uphathe. Futhi ingubo egugile njenge-t-shirt, ephunga njengenkosikazi noma inkosikazi, ingabangela izimangaliso. Yebo, kufanele futhi unike i-puppy yakho imithetho eyisisekelo njengesihlalo, Indawo futhi uhlale uma lokhu kungakaze kwenziwe. Le miyalo ikusize nje kuphela ukuba ukhululekile ukucindezeleka ngosuku, kodwa futhi ukwenza inja ngokushesha kulokho inja embhedeni ukujwayela.
Ayikho imikhiqizo etholakalayo.
Yini okufanele uyithenge inja embhedeni cabanga?
Lapho uthenga kusuka imibhede inja kufanele uqaphele:
- Ubukhulu obufanele bombhede, ngoba ngale ndlela kuphela inja yakho izozizwa ikhululekile futhi izokwenza inja embhedeni futhi njengendawo yokulala.
- Izinto kanye nokucubungula, ngoba ikhwalithi yezinto ezisetshenzisiwe esinqunyiwe ayinqumanga nje induduzo yamanga kodwa futhi nokuphila komsebenzi.
- Ukuhlanza kalula ukubonga okukhushulayo nokulula ukuhlanza izembozo. ehlanzekile imibhede inja bheka hhayi kuphela amahle kakhulu, kodwa futhi kukhona engcono hygienic kubantu nezilwane.
- Ukuqina. imibhede inja kufanele kube nokumelana nokumelana, ukuze inja nomnikazi isikhathi eside bajabulele indawo entsha yokulala futhi abantu abahlala kwendle bangakwazi ukwahlukanisa zibe izingxenye ezizimele.
- Ukuzinza ukuma kwezigcwalisi. Ngokuvamile, kubiza kakhulu imibhede inja , izinga eliphezulu kufanele libe yi-upholstery.
- I-slip-anti resistant material insulation engaphansi kwe-inside ivimbela inja ukuthi ingashiyi kahle inja embhedeni ngesikhathi sokufaka noma ukubuyisela emuva.
- Inani nokusebenza kufanele kube nobuhlobo obuhle. Akuyona njalo umbhede obizayo kakhulu futhi ohamba kahle futhi ofanele inja yakho. Qhathanisa amanani kwi-intanethi futhi usebenzise ama-izaphulelo kanye nokukhushulwa kwekhuphoni.
- Umphumela wezempilo akufanele futhi ushiywe ngaphandle kwendawo yokubuka. Izinja sezikhulile, abanye ngeshwa baphinde bagule futhi bahlupheke kamuva izifo zamalunga noma amathambo esifuba. I-orthopedic inja embhedeni ngokugcwaliswa komuntu ngamunye kuyindleko enkulu, kodwa bumnene phezu kwenja futhi kunciphisa ubuhlungu.
- Amanye amamodeli anikeza izesekeli ezikhethekile ezifana nemithwalo eyengeziwe, isembozo esingaphezulu noma izembozo zokufaka esikhundleni. Ngenxa yale mikhiqizo, imali ingagcinwa futhi.
- Ikhwalithi ye imibhede inja awutholi ngaso sonke isikhathi ngamanani aphezulu. Ngaphambi kokuthenga, hlola imiphumela yokuhlola evela ezifundeni ezizimele futhi ufunde imibono yamakhasimende anganelisekile kakhulu. Ngale ndlela ungavimbela ukuthenga okubizayo.
Isiphetho ku imibhede inja ukuthenga
Inja ilala noma ama-dusts kuze kube ngamahora angu-20 ngosuku. Ngakho-ke, kufanele kube lula ukulala phansi, ngakho ukulala kungaba nomphumela wokuphumula. Qinisekisa ukuthi uthenga ikhwalithi futhi ukhetha imikhiqizo emisha imibhede inja kusuka Knuffelwuff, Songmics kanye noMonkey Mountain noma Trixie. Qaphela imikhuba yokulala nokulala yenja yakho kanye nobukhulu obuhle bombhede. Ngaphezu kwalokho, uma uthola indawo efanelekile, inja yakho izokwamukela umbhede ngaphandle kokungabaza futhi ungathanda ukuba kuyo.
I-Knuffelwuff 14097-015 Inja Yombhede Wenja Ibhasikidi Inja Isofa Inja Isitshulu Inja Ibhasikidi Ikhava Yokugeza Inja Enkulu IXxl Lotte Grey Inkomba
Ikhava elikhishwayo, lingasetshenziswa ku-30 degree
Izembozo zokufaka esikhundleni esitholakalayo
Umbhede wezinja owenziwe nge-velor eqinile
I-ECO-TEX ejwayelekile ye-100
Umbhede wenja we-BedDog ®, isofa lenja elenziwe ngeCordura, i-microfibre velor, umbhede wezinja ogeze ngomngcele, umcamelo wenja isikwele, ngaphakathi, ngaphandle, i-XL, i-The-Rock, isibonisi esimnyama-grey
Ukuze uthole amanye amamodeli namadili angabizi ku-Amazon, chofoza ngenhla ku-Bed-Dog ngaphansi kwesihloko
Ukunethezeka nokunethezeka: Ukunethezeka kokuqamba amanga ngenxa yokuhlanganiswa nokuhlanganiswa kwezimpande ezenziwe ngama-foam flakes
I-robust, iminyango ezinzile yenja: Ukuhlala inja ehlala njalo enomphetho, ukukhuphuka kokuqina kokuqala kanye nokukhanya kwamanzi okulahla, ubukhulu obunamathele futhi obungenasiphelo
Ukuhlukahluka: Umbhede wenja ongaphakathi nangaphandle wekhaya, imoto noma ingadi, njengendawo yokuphumula noma yokulala kwenja
Umbhede wezilwane ezinakekelwa kalula: indawo ingasetshenziswa kalula futhi isuliwe, ikhava ekhishwayo ekhishwayo kusukela enqoleni yezinja ishable ku-30 degree
Umbhede wenja, imicamelo yenja, obhasikidi bezinja ngemicamelo eguqukayo, usayizi M, umbala ompunga / omnyama
ISIQINISEKISO ESIPHELELE. Lo mbhede wezinja othambile futhi onobuqili kufanele ungabi nawo ezindlini. I-non-slip floor enezimbotshana ezingashelelezi iqinisekisa ukubanjwa okuhle kanye nokuklama kwanamuhla komambi wamehlo.
IPHAKATHI LESITOLO SEZOBUCHWEPHESHE Umshini ophansi osuswayo owenziwe ngezinto ezimbili ezihlukile wenza induduzo yaleli bhasikidi iphelele. Inja yakho izoyithanda i-underlay yayo ngobuqili.
ISIVUMELWANO SOKUTHENGA. Ukungena okujulile kusiza ekungeneni nasekuphumeni. Ukuphuma kwezinja zawo wonke amasayizi ngakho-ke kukhuthaza inhlala-kahle.
UKULUNGA KULULA. Lo mcamelo wenja kulula kakhulu ukuwahlanza futhi ungagezwa ngesandla.
Ukwahlukana. Ngokukhetha okuhle, kukhona obhasikidi bezinja zethu ngemibala ehlukene nobukhulu. Kutholakala ngombala ompunga / omnyama nosayizi M, kuboniswa ubukhulu obucacile ezithombeni.
I-Catalpa Flower Inja Umbhede XXL Inja Mat Isilwane Sembhede Inja Sofa Inja Cushion Engagezekayo 125 x 80 x 12 cmDisplay
Umcamelo wenja unezembozo ezikhipha ngokuphelele futhi ugeza ngomshini kuze kufike ku-30 ° C.
Ilungele izilwane ezinesisindo esifinyelela ku-approx. 70kg.
Ikhwalithi ephezulu icutshungulwa ne-anti-slip coating ngezansi
I-125 x 80 x 12 cm Umbhede omkhulu wezilwane owenziwe nge-polyester ngesembozo se-beige non-nokwelukiweyo. Kulingana kahle cishe kuyo yonke imvelo ephilayo.
Okunethezekayo futhi okuthambile, okuphephile, okuhlala isikhathi eside, okulula ukuwahlanza, yisinqumo esihle kakhulu sesilwane sakho sasekhaya.
I-NIBESSER inja yombhede Tierbtt ikati embhedeni inja usofa wekati usofa wekati usofa cushion fluffy, uthambile futhi Iyagezwa ekubonisweni kwenja yamakati
I-oftSoft futhi ifudumele: okubonakalayo yi-velvet nekotini futhi kuzizwa kuthambile futhi kufudumele.
Imibhede yeBettenPerfect: nikeza isilwane sakho indawo efanelekile yokuphumula, ukuphumula futhi uphumule.
Ngaphansi kombhede wesilwane senziwe ngendwangu engenamvula, engavunyelwe manzi.
Cave Ishagi lezilwane zasekhaya - lilungele izilwane ezifuywayo ezithanda indawo ethokomele ukuba zigoqeke ngokuphepha. Izinja namakati zithanda ukungena zingene emibhedeni ethambile nakuma-sofa, futhi zizizwa ziphephile lapho.
Ubukhulu bembhede yesilwane: 26x40cm; 26x50cm; 26x60cm; 26x70cm; 26x80cm; 26x100cm. Imininingwane: Lo mkhiqizo ugcwele vacuum, sicela ulinde imizuzu engama-30 ngemuva kokukhipha.
Umbhede wezinja we-FEANDREA, i-XL, isudi yenja, eyenziwe ngendwangu ye-Oxford, ene-anti-slip ngezansi, isibonisi esingu-100 x 70 cm PGW28H
UMZUZU OGCWELEKILE WENZELWA: Nikeza inja yakho ukubuyela kwakho ngale mbhede yenja ebanzi, okuhlaba umxhwele ngokusebenza okuhle kakhulu, izinto eziqinile nokuhlanza okulula. Ungayinikeza kanjani impilo enhle egcwele ubumnandi!
IZINDLEKELE ZESIZWE: Umngani wakho omkhulu, no-furry ulokhu ezama ukugoqa embhedeni wenja omncane kakhulu kuye? Vele akaphumeleli - inja empofu kanjena ... Le sofa inja enesizotha yenzelwe ngendlela yokuthi ngenxa yobukhulu bayo obukhulu bangaphakathi inikeza isikhala esanele somngane wakho onezinyawo ezine, kungakhathalekile ukuthi ungumnikazi weBorder Collie noma i-Alaska Malamute
NGOTHANDO LOKUTHOLA: Zisondele izinsuku lapho umakithi wenja osanda kuthengwa edwengulwa yinja yakho kungakabiphi. Le bhasikidi yenja yenziwa ngendwangu eqinile ye-Oxford ukuqinisekisa impilo ende yenkonzo. Ngaphezu kwalokho, isigodi esidonsa kahle siqiniswa ngo-seams ongeziwe ukuze ukugcwaliswa kuhlale kusendaweni
HLAZIYA KULULA: Akudingeki uchithe isikhathi esiningi uhlanze le sofa yezinja ngoba iyazisusa izinwele. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuxubha umbhede wenja noma ukusula ngendwangu emanzi
SIYAKHATHAZELWA? Inkonzo yethu yamakhasimende ihlala ikhona. Ungacabangi isikhathi eside bese uyishaya nje!
Umbhede wezinja we-elan ® - obhasikidi wenja ongagezisayo - okokuphefumula okungaphezulu - onqenqemeni olwengeziwe - umbhede wenja ongabonisi ongashisi
AL UKUKHANYA OKUKHULU Kakhulu - Izesekeli zethu zenja ye-Elan zibonisa ngokukhiqizwa kwekhwalithi yokuqala nekhwalithi ephezulu yokusebenza: Ukuze umngani wakho onemilenze emine alale ngokuthula!
C UKULUNGA KULULA - Kungakhathalekile ukuthi luhlala lufushane noma lude, izinwele zenja zingaxoshwa kubhasikidi yenja yethu kalula kanti nokugcotshwa okuncane kungahlanzwa ngesandla ngamanzi acacile!
🐶 I-EXTRA NON-SLIP - Ukuze indawo yethu yezinja ihlale isendaweni ngaso sonke isikhathi nokuthi umlingani wakho angawela embhedeni wakhe wenja ngokuswayipha, ifakwe izinto ezingatheni!
MAT I-ROBUST MATERIAL - Imiphetho ekhuphukile enikela ukuvikela okuphelele kokungakapheli kanye ne-polyester Indwangu enakekela ukunakekelwa okulula ukuvumela amandla okuqina, nakho okupholile kakhulu!
🐶 PROMISE ELAN - Njengoba sithembele ku-100% ngekhwalithi yombhede wethu wezinja, sikuvumela ukuba uthenge ngaphandle kwengozi futhi ubuyisele imali yakho uma ungeneliswa ukufika ezinsukwini ezingama-90 emva koku-oda!
I-SlowTon Pet Bed Ethandekayo I-Pet Bed Inja Sofa Cat Sofa Cat, Donut Cuddle Nest Warm Soft Plush Display
Ukunakekelwa okulula-- Okungenamibala futhi kulula ukunakekela. Umata woboya ngaphandle kombhede wesilwane awunakususwa. Sincoma ukuwageza ngesandla noma ngomshini, ukuwasomisa endaweni yokucoca nokuwacoca emlilweni ophansi.
Ijamo le-donut yesimanje - Umbhede wezinja we-donut uwukukhetha okuhle kwezilwane ezifuywayo ezithanda ukulala zilingane. Imiphetho ekhulisiwe inikezela umuzwa wokuphepha futhi inikezela ukuxhaswa kwekhanda nentamo. Ama-filters e-Ultra-soft anciphisa izinhlungu ezihlangene nezemisipha lapho elele.
Isitezi esigcina ukuphepha esingafakwa ngaphansi komhlaba - Phansi kombhede wezinja opholile uqukethe izindwangu ezingasuki, ezinamathele futhi nendwangu enoxinothi oluphezulu olungenamanzi, olungashisiyo nolungenakubumba. Igcina umbhede wesilwane usendaweni yakho futhi iqinisekise ukubekwa ngaphandle kokukhathazeka kwi-tile naphansi kwezinkuni ekhaya.
Ithokomele futhi ihlala isikhathi eside ngezilwane ezifuywayo --- Lo mbhede wekhwalithi ephezulu yezilwane wasekhaya ungowokusebenza kahle futhi uqinile ngesibambo esikahle. Abangane bakho abancane be-furry bazozizwa bezungezwe uthando nemfudumalo. Kugcina izinja zakho zilala kahle ebusika obubandayo.
Izinsimbi ezithambile - Ikhwalithi ephezulu eyenziwe ngohlobo lwe-plush fur, inhlanganisela ekhululekile futhi enomoya. I-Super soft 4 cm eyenziwe ngoboya kanye ne-PP cotton filler yenza lokhu kugcwala kombhede okugcwalise-nokunwebeka, kube mnene futhi kugcwele, kushelele futhi kuthambe, kunakekele isikhumba sezilwane ezifuywayo.
I-FEANDREA Umbhede wezinja ongagezisayo, isembozo esikhiphekayo nesingahlanzwa ngomshini, isifihla senja esinobuhlakani, isibonakaliso esinsundu se-90 x 25 x 75 cm PGW11CC
I-BED OWN BED FOR LOURS LEGS: Ngalokhu embhedeni wezinja ezikhangayo inja yakho izozizwa ilungu lomndeni eligcwele
ISIQINISO ESIKHULULEKILE NGOKUKHONA KWAKHO: Ngalokhu inja yokugqoka nokuqhakaziza isilwane sakho sizozizwa siphelele ekhaya. Ngenxa yombhede omuhle kanye nombhede ohlambulukile, inja yakho iyoba nendawo ekhululekile lapho ingakwazi ukuphumula kahle; futhi i-anti-allergenic
UKUQALA UKUPHATHA OKUHLE: Imikhawulo yombhede iphakanyisiwe futhi iphakanyiswe kahle ukuze inja yakho ikwazi ukuphumula ikhanda kuyo; Ngaphezu kwalokho, wonke ama-seams asetshenziselwa kahle; Ngaphezu kwalokho, i-underside ye-non-slip indwangu enezintambo ivikela inja yakho emakhazeni nasebusweni
UKUKHENZISWA NGAPHAMBILI NAMAKHAYA: Isembozo sinakususwa futhi umshini uyasheshe
I-100% SATISFACTION GUARANTEE: I-FEANDREA inikezela ngamakhasimende ochwepheshe ngaphambi nangemva koku-oda. Ungacabangi isikhathi eside bese uyishaya nje!
I-FEANDREA inja yombhede, inja yebhasikidi nge-cushion eguqukayo, isofa lenja, inja yenja, ethokomele, enokuphefumula, okungashisi, umphetho ophakanyisiwe, i-80 x 60 x 26 cm, ngezinja ezifika ku-15 kg, i-motGled grey PGW26GAnzeige
IZENZAKALO ZEZOBUCHWEPHESHE: Uma inja yakho ingena shí embhedeni ebusuku, kungenzeka ukuthi indawo yakhe yokulala ingakhululeki kakhulu, futhi ifuna ukukuqwashisa ngesidingo embhedeni wezinja ophefumulayo
I-GORGEOUS: Isofa lenja liphakamise imiphetho evikela isilwane sakho kusuka kokusalungiswa. Ngaphezu kwalokho, inamathela kahle, ukuze inja yakho ikwazi ukwenza kube ntofontofo ngempela ngemuva kohambo olude
OKUFANELE KWENZIWE EPETROLEUM: IVelvet nosilika akulungile kubhasikidi yenja. Izinto ezisetshenziswayo kumele zibe ngamandla. Ngakho-ke, le mat yezinja yayenziwe ngendwangu eqinile yekotoni-polyester. Ukugcwaliswa kubuye kube yi-hypoallergenic
UKULUNGA NOMA KULULA KUKHULA? I-cudion eguquguqukayo ye-cuddly yenziwa ngoboya obugqamile be-PV ngakolunye uhlangothi, okunikeza ukufudumala nokuqhathanisa okusebenzayo empunga ye-basket basket. Uma uyithanda le mpunga, ungaphendulela umcamelo bese umbhede wenja ucacile futhi usha
Isihloko sangaphambiliniAngler esihlalweni
Isihloko esilandelayoImishini yokugubha